Iindaba -Itshintsha kangaphi iCartridge yokucoca into yokucoca amanzi
Itshintsha njani iCartridge yokuhlanjululwa kwamanzi
1. PP element yomqhaphu lokucoca ulwelo
Isixhobo sokucoca umlilo esinyibilikisiweyo senziwe nge-polypropylene yefayibha eqaqambileyo ngokunyibilika okushushu okushushu, okusetyenziselwa ukubamba amasuntswana amakhulu obumdaka, njengokuqina okumileyo kunye nentlenga emanzini. Umjikelo wokubuyisela ziinyanga ezi-3-6.
2. Icebo lokucoca ulwelo elisebenzayo
Ngobushushu obuphezulu, uxinzelelo, ukuntywila kunye namanye amanyathelo, amalahle, isarfust, iqokobhe leziqhamo kunye nezinye izinto ezivelisiweyo ziguqulwa zaba zizinto ezisebenzayo ukukhusela intlenge. Isetyenziselwa ukubhengeza umbala owahlukileyo kunye nevumba elikhethekileyo emanzini. Umjikelo wokubuyisela ziinyanga ezi-6 ukuya kwezi-12.
3. I-KDF (ubhedu kunye ne-zinc alloy) isihluzi
Olu hlobo lwento yokuhluza isetyenziswa ikakhulu kwindawo yokucoca amanzi ukususa ichlorine kunye nesinyithi esinzima emanzini ngokuncitshiswa kwe-oxidation. Umjikelo wokubuyisela umalunga neenyanga ezili-12.
4. EM-X elementi yecebo lokucoca ulwelo
I-EM-X elementic filter element ilawula ixabiso le-pH lamanzi ngokukhupha izinto ezilandelwayo. Umjikelo wokubuyisela esi sihluzo mde, ngokubanzi yiminyaka emi-5.
5.Ukuguqula umva we-osmosis (RO)
Ubungakanani bepore ye-membrane ye-RO ngamaxesha angama-260000 eenwele. Ukongeza kwiimolekyuli zamanzi ezicocekileyo, ezinye iibhaktiriya, ii-virus kunye ne-ion enzima kunzima ukudlula, kwaye isiphumo sokuhluza sinamandla kakhulu. Ngokubanzi, umjikelo wokubuyiselwa kwesi sihluzo yiminyaka emi-2, kodwa kufuneka ivavanywe ngepeni yovavanyo lwe-TDS. Ukuba ukufundwa kwepen yokuvavanywa kwe-TDS kugcinwa ngaphakathi kwe-10 ppm, inokusetyenziswa ngesiqhelo.
Kk Gac Cto Isihluzi seCartridge, iCartridge yokucoca amanzi, Isihluzi sePp Meltblown Cartridge, Icebo lokucoca ulwelo emgceni, Iifilitha zamanzi zeNdlu iphela, Kk Isihluzi seCartridge,